प्रकृतिमाथिको अतिक्रमण नरोकिए ठूलो समस्या निम्तिन्छ : मुख्यमन्त्री राउत
शिलापत्र संवाददाता जनकपुर, २९ पुस
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सभा गोष्ठी गरेर जलवायु परिवर्तन रोकिन नसक्ने बताएका छन् । उनले प्रकृतिमाथिको अतिक्रमण अविलम्ब नरोकिए ठूलो समस्या निम्तिने चेतावनीसमेत दिए ।
मुख्यमन्त्री राउतले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ विषयक सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
प्रकृतिमाथि अतिक्रमण भइरहेकाले नै प्रकृतिले मानव जातिलाई दण्डित गरिरहेको उनको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न फिल्डमै काम गर्नुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो समस्या पहिल्याउनुको साटो विदेशीको समस्यालाई सभागोष्ठीमा केलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
चुरेको दोहन र वन विनाशले नेपालमा प्राकृतिक विपद निम्त्याएको र यस्तो कार्य रोक्नुको साटो सभा सम्मेलनमा समय खर्चिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘दिनदहाडै क्रसर उद्योगले चुरे दोहन गर्दै छन्, दिनहुँ वन विनाश हुँदै छ, यस्ता कार्यलाई रोक्न प्रयास गर्नेहरूको दिनदहाडै हत्या हुँदै छ, हामी मुकदर्शक भएका छौं । प्रहरी हाम्रो मातहतमा छैन, संघीय सरकारमातहतको प्रहरी प्रशासनले रोक्न सकेको छैन । योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?’
तलदेखि माथिसम्मको सेटिङमा जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव निम्त्याउने खेल भइरहेको आरोपसमेत उनले लगाए । विकासको नाममा चुरे र वनजंगल विनाश गरेर सडक निर्माण गर्ने काम भइरहेकाले त्यसको दुष्प्रभाव तराई मधेसमाथि पर्ने निश्चित छ । यसलाई रोक्न पर्यावरणविदहरूले कलम चलाएर तीनै तहका सरकारको आँखा खोलिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रमा प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झालगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्यहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलगायतको उपस्थिति थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, २९ पुस २०७६, ११:५०:००